#1PvtStudioKitchnBath_CentrNoidaDelhiNCR_Metro650m - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAparna
95% yeendwendwe zakutshanje zinike indawo izinga leenkwenkwezi eziyi-5.
INDAWO! I-Sec19A Tulsi Marg Noida. Intombazana yemihla ngemihla, inkonzo yokutshayela. Isitudiyo esinefenitshala (i-pvt en-suite kitchenette, ibhafu) I-FreeParking, Ukhuseleko. Ukufikelela kwi-Internet. Abathandanayo abanobuhlobo. Indawo yokuhlamba iimpahla ebhatalelwayo. Akukho nto ifunekayo. Akukho FLEXIBILITY-CHECK-IN (1:00pm)/PHUMA (11: 00am). Umgangatho wesibini akukho Elevator.
I-Metro650m, i-Sect18 Mkt400m, i-DLMall750m, i-New Delhi
RailwyStatn17kms, i-IGIntrntnl Airport27.7kms Ukwakhiwa okutsha. I-wifi, ukubuyisela umbane, i-AC, ifriji, amanzi ashushu, ibhedi enkulu, idesika. Ibhalkhoni esetyenziswa nangabanye abantu, i-terrace. AKUTSHAYWA.
Wamkelekile kwi-Yash Lok -- ikhaya lakho elikude nekhaya! Ndingumbuki zindwendwe wakho uAparna. Ndincedisa ekwamkeleni iindwendwe kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezininzi eYash Lok kunye nomama wam u Usha Rani.
Asinayo imvelaphi kwishishini lokubuka iindwendwe. Nangona kunjalo, njengomhambi wehlabathi, ndiyalazi kakuhle ixabiso lokufumana ‘indawo yokuhlala elungileyo, ngexabiso elifanelekileyo'. Andikhangeli ‘iintsimbi nembali' xa ndikhetha indawo yokuhlala, kodwa ndigxininisa kwezi zinto zilandelayo: Indawo ephakathi evulekileyo; Coca; Ikhuselekile (kwanomfazi ohamba yedwa); Yabucala (abangengabo ababuki zindwendwe abazimeleyo); Ukunxibelelana ngokunyanisekileyo, ngokucacileyo; Iyafikeleleka.
Mna ngokobuqu ndikhangela indawo yokuhlala efanelekileyo, ekhuselekileyo necocekileyo, eyokwexeshana kummandla we-NCR & wazikhandla. Oku kwakundikhuthaza ukuba ndikholise umama ukuba ndiguqule uYash Lok, indlu yabazali bam eNoida, ibe yi-Airbnb. Asikhuphisani necandelo lezodidi oluphezulu, kwaye sizama ukufezekisa-ukuzinikela kwethu endaweni yoko kukufezekisa izinto eziphambili ezingasentla. Sinikezela ngendawo yokuhlala ezolileyo, enokuthula, egcwele ukukhanya kwelanga nomoya. Izitudiyo zethu zizilungele iindwendwe ezixabisa ukuzola nokulula.
Isakhiwo (Yash Lok) kunye Nesishwankathelo Seflethi:
I-Yash Lok inamanqanaba ama-3. Umgangatho wesibini unikelwe ngokupheleleyo kwiindwendwe; kodwa ke akuzukubakho uwedwa kuwo wonke umgangatho. Kukho iiflethi ezine ezizimeleyo ze-studio kwiikona ezi-4 ze- 'aangan'/i-patio. Iflethi nganye inendawo yayo yokungena, ibhafu nekhitshi elincinci elinombane. Alikho iholo okanye ikhitshi elisetyenziswa ngumntu wonke. Iindwendwe zisebenzisa iindawo eziqhelekileyo (ezivulekileyo) ezifana ne-aangan/iveranda, ibhalkhoni, ithala lophahla, izitepsi.
Le ndlu yeyeflethi okanye indlu ekwicomplex 1 — enye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezine. Nge- 'studio' apt sithetha igumbi elikhulu elinebhedi enkulu kwelinye icala, ikhitshi elincinci labucala kwelinye icala kunye nebhafu yabucala. Le ASIYIYO i-1BHK kuba ayikho iholo, kwaye ikhitshi elincinci likwicala elinye legumbi. Le yiflethi (hayi igumbi labucala) kuba inomnyango ozimeleyo ibe ayikho kwenye indlu. Ineminyango eyi-2 yangaphandle - eyi-1 iya kwibhalkoni kunye nenye kwindawo evulekileyo ye-aangan/iveranda. Zombini i-angan kunye ne-balcony zikwazi ukungena kwisitepsi (akukho lifti) ekhokelela kwindlela yokungena imoto kunye nesakhiwo ngaphandle; iindwendwe akuyomfuneko ukuba zingene kumgangatho wokuqala okanye kwiiflethi ezisemgangathweni xa zifika okanye ziphuma kwisakhiwo. I-angan nayo ineleli yentsimbi ekhokelela kwithala lophahla.
Isakhiwo sihleli kwindawo eninzi, sikhukuliswe kukukhanya kwemvelo nokungenisa umoya okubalaseleyo. Kukho indawo ezininzi zokupaka simahla nezikhuselekileyo -- zombini zisendleleni naphandle kwesakhiwo. Abagcini bezokhuseleko be-19, bavala A banezitya zabo ngaphandle kwesakhiwo kunye nendoda eyi-24x7. Icandelo 18 kwisikhululo semetro likumgama weemitha eziyi 650. Kwakhona sidla ngokuba nee-auto rickshaws, ii-rickshaws zomjikelo kunye neekhabhathi ezipakishwe ngaphandle kwesakhiwo.
UYash Lok ulele embindini wecandelo eliphithizelayo 18-19 kwindawo yaseNoida. Yonke into ukusuka kwiivenkile zokutya kunye nabathengisi beziqhamo/imifuno ukuya kwiivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu, izibhedlele, iibhanki, iimuvi njl zikwazi ukuhamba lula (ngaphakathi kweemitha eziyi-200 ukuya kwiikhilomitha eziyi-2). Iyi-110M ukusuka kwisibhedlele iMax, i-200m ukusuka kwiMarike yase-Atta kunye nabathengisi bayo, abathengisi beziqhamo/imifuno njl; iimitha eziyi-400 ukusuka kwiMarike yeCandelo ephithizelayo ye-18 kunye neevenkile zayo, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutya, iibhanki, iimuvi njl njl; i-DLF Mall yaseIndiya -- ibhekwa njengenye yeevenkile ezinkulu zokuthenga eIndiya kwaye isasazeka ngaphezu kwe-2 miliyoni sq. ft. Kubantu abathanda ukuzilolonga, i-Noida Stadium enomzila wayo weemayile eziyi-2 wokubaleka/wokuhamba ngebhayisekile uhamba ngeenyawo kangangeekhilomitha eziyi-2 ukuya e-Tulsi Marg; ibala livulekele uluntu ibe indawo yokungena ayibhatalelwa.
Izinto Ozilindeleyo ezibekwa kwinqanaba:
Akukho ndawo ilulungele undwendwe ngalunye. Ukwaneliseka lundwendwe kulungile. Ngaphambi kokuba ubhukishe, nceda ufunde apha ngezantsi ukuze uyazi into omele uyilindele.
- Isithembiso sethu & izinto eziphambili - Ifunyanwa kwindawo ekhuselekileyo, ephakathi (umgama wokuhamba kuzo zonke izinto ezinokusetyenziswa), indawo yokuhlala; kwindlela ephambili (Tulsi Marg) entliziyweni yeNoida & kufutshane neDelhi (umgama othile kwislayidi kwimifanekiso). Gxininisa kucoceko. Unxibelelwano olungabonakaliyo nolungabonakaliyo. Kwindawo nezinto onokuzisebenzisa ezifumanekayo, amaxabiso angaphantsi kakhulu kwezinga lemarike.
- Umgaqo-nkqubo wethu ‘ongekho-frills' - I-AirBnbs inoluhlu olubanzi, ukusuka kuhlahlo lwabiwo-mali ukuya kwixabiso eliphezulu lokugqibela, kunye nexabiso ngokufanelekileyo. Kuthi, ukunikela ngesithembiso sethu ngoxa sigcina istudiyo sethu sifikeleleka kangangoko kunokwenzeka, yeyona nto ibalulekileyo. Sinikezela ngezinto eziyimfuneko (iinkcukacha zingezantsi) ezifunekayo ukwenza amava okuhamba akhululeke, kwaye uphephe nayiphi na i- ‘frills' eza kusinyanzela ukuba sinyuse izinga legumbi lobusuku (umz. akukho zinto zokuzonwabisa onokukhetha kuzo — i-TV, imidlalo yokuzonwabisa; akukho matshini wokuhlamba/oomisa, imaykrofoni njl.njl).
- Imilinganiselo yethu yeenkwenkwezi eziyi-5 - Inkqubo yokulinganisa umlinganiselo ka-Airbnb yahlukile kunenkqubo yokulinganisa izinga lehotele. Ukuhlekisa okuqhelekileyo phakathi kwababuki zindwendwe bakwa-Airbnb yile: “Ukuba ubuya, sinike umlinganiselo we-5; ukuba awusoze ufune ukubuya, sinike umlinganiselo we-4”. Umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-4 (okanye ngaphantsi) ungacima ngokukhawuleza ii-BNB ezincinci, ibe nanini na undwendwe lusinike umlinganiselo we-4, sicinga ukuba aluzukubuya. Iindwendwe ezininzi zisinike umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 ngomusa; hayi ngenxa yokuba sinehotele okanye i-Luxury BnB okanye siphelele (okanye silwela ukuba), kodwa ngenxa yokuba sisebenza nzima ukuze iindwendwe zethu zihlale kamnandi kangangoko kunokwenzeka. Siyasabela kwaye siyithatha nzulu ingxelo yokwakha. Inani elikhulu leendwendwe ezibuyayo kunye/okanye ukwandisa ukuhlala kwazo. Umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 uthetha nje "Siye sanamava amahle ingakumbi xa siqwalasela ixabiso esilibhataleyo, kwaye siya kukuvuyela ukubuya/ukwandisa ukuhlala kwethu".
- Ukucoca - intombazana yemihla ngemihla kunye nenkonzo yokutshayela. Ngexesha lokuhlala kwakho — umthinjana uya kukhukulisa igumbi, ulikhuphe ngento yokubulala iintsholongwane phantsi, ucoce izitya uze uthulile iflethi; umtshayeli uya kucoca igumbi lokuhlambela nesitya sangasese. Abasebenzi bethu bayicoca nzulu iflethi okanye indlu ekwicomplex emva kokuhla kondwendwe ngalunye. Abasebenzi bethu bahlamba i-angan, i-balconies kunye nokutshayela kunye nokutshiza isitebhisi rhoqo. Ekubeni abasebenzi bethu betyelela le ndlu iiyure ezimbalwa kuphela, iiyure zokucoca zilungisiwe. Asizukwazi ukwamkela izicelo zokucoca iflethi okanye indlu ekwicomplex ngamanye amaxesha emini.
Nangona le ndlela yokucoca ingasimahla, sibhatalisa ‘imali yelinen‘/'imali yokucoca' eyi-R 220 qho kubhukishwa imali etsalwa kube kanye yindoda yethu yokuhlamba impahla. Umatshini wethu wokuhlamba impahla ucoca kakhulu zonke izinto zebhedi, izinto zokogquma imiqamelo, izinto zokogquma ingubo neetawuli emva kokuphuma kondwendwe ngalunye nemali yokucoca ziya ngqo kuye. Le mali omele uyibhatale iqinisekisa ukuba siyakwazi ukubhatala ezi ndleko (ingakumbi xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane) singakhange sinyuse ixabiso legumbi losuku. Ukuba ungathanda ukuba sitshintshe ilinen yebhedi kunye/okanye iitawuli ngexesha lokuhlala kwakho, siya kuyenza loo nto. Nangona kunjalo kuza kufuneka uhlawule umatshini wethu wokuhlamba impahla ngale nkonzo ngesiseko ngasinye [Ishiti lebhedi - i-Rs 50; Into yokugquma umqamelo - i-Rs 10 ngento nganye; Ithawula - i-Rs 50 ngento nganye; I-comforter cover - i-Rs 50; Into yokuhombisa ibhedi/into yokugquma ibhedi - i-Rs 50].
- Ixesha lokufika/lokuphuma - Ixesha lokufika liphakathi ko-1:00 pm no-10: 00 pm; ixesha lokuphuma liphakathi ko-11: 00 am. Ngenxa yokuba sidla ngokubhukishwa emva emva emva emva emva KOMHLA, kwaye abasebenzi bethu kufuneka bacocwe nzulu qho emva kokuhlala kondwendwe ngalunye, kwaye abasebenzi bethu baneeyure zokucoca ezilungisiweyo, akukho BHETYEBHETYE KWI-CHECK-INS ZAKUQALA okanye emva KWEXESHA le-CECK-OUTs.
- Inkxaso - Umzala wam uhlala phantsi kunye nosapho lwakhe. Unceda iindwendwe zibhalisele ukufika zize zinikezele ngenkxaso yemihla ngemihla. Nayiphi na ingxaki okanye ukunyuka, ndifumaneka kwincoko ka-Airbnb; kodwa ekubeni ndingaphandle kwelizwe, kusenokubakho ixesha elingapheliyo lokuphendula kwam.
- Akukho lifti - Izitudiyo zikumgangatho wesibini kwaye akukho lifti. Ekubeni singenabasebenzi abahlala ixesha elizeleyo, iindwendwe kufuneka ziziphathise ngokwazo imithwalo yazo.
- Iincutshe - INoida igcwele iingcongconi, iimbovane, iimpuku, amacikilishe, ii-squirrels njl. Ngoxa sisenza amalungiselelo okuzigcina zikude neeflethi okanye izindlu ezikwicomplex (iingcongconi ezikhusela iingcongconi, iingcongconi, ii-pad ezincamethelayo, ii-ant-sprays, into yokubulala iintsholongwane nemophu ebulala iintsholongwane), le yimfazwe eqhubekayo. Ngoko nanini na xa uza kuhlala nathi, uya kubona le mbumbulu isetyenziswa.
- Uxinzelelo lwamanzi - Uxinzelelo lwamanzi kwiimvula lusezantsi; sinikezele ngamabhakethi kunye neekomityi ngeenjongo zokuhlamba (umakazi wethu uhlambulula ezi zinto phakathi kokuhlala kweendwendwe).
- Umgangatho wamanzi - Umgangatho wamanzi eNoida uhlwempu (intsalela kumanzi empompo). Sinikezela ngamanzi asebhotileni ngeenjongo zokusela/zokupheka kwiikharaveni.
- Iinyanga zasehlotyeni - Nangona sibonelele ngee-AC & fans, ii-studio zikumgangatho ophezulu kunye neenyanga zehlobo eziphezulu zinokungakhululeki (ngokukodwa kwabo banganyamezelekiyo ukufudumeza).
- Akukho iphepha yangasese - Thina iibhidi/Jets ngesandla kwizindlu zethu zangasese & hayi iphepha yangasese ngenxa impembelelo yayo embi yokusingqongileyo.
- Ubhaliso londwendwe & iGovt. Isazisi - Zonke iindwendwe ezihlala kwindlu kufuneka zisayine irejista yondwendwe zize zabelane ngeGovt yazo. Isazisi (siza kuthatha umfanekiso). Ekubeni sineendwendwe ezininzi ezihlala kwiiflethi zethu ezahlukahlukeneyo, ngenxa yokhuseleko lweendwendwe zethu, sinesazisi esinyanzelekileyo SONDWENDWE NGALUNYE oluhlala ubusuku bonke.
- AC, fan isilingi, amandla back-up, ifriji, amanzi ashushu, heater ephathekayo
- Wi-Fi - Airtel broadband (isantya intanethi ukuya ku 40Mbps, data mda); uqhagamshelo ekwabelwana phakathi 2 iiflethi.
- Ibhedi enkulu enomatrasi, umatrasi omfumamfuma nemiqamelo ethambileyo, amashiti omqhaphu asandul 'ukuhlanjwa nemiqamelo, ingubo etofotofo enomqamelo ococekileyo, into yokogquma ibhedi nemiqamelo yokuhombisa. Ifumaneka xa icelwa (ngemali eyongezelelekileyo) yeendwendwe ezongezelelekileyo: ikhothi enye esongwayo (i-niwad charpoy) enomatrasi womqhaphu, ishiti, umqamelo kunye nengubo etofotofo; kodwa ke iza kulunga kwindawo yakho ibe kuza kufuneka isongwe emini ukuze iindwendwe zikwazi ukusebenzisa ikhitshi elincinci ngokukhululekileyo.
- Idesika yokufunda nesitulo esinomqamelo wesitulo, itafile esecaleni, izibane, imethi ye-jute, i-moodhas/ii-ottoman.
- Iwodrophu enendawo yokugcina izinto ezininzi, iihengari, iayini yeempahla, isixhobo sokomisa iinwele.
- Ikhitshi labucala eline- induction burner, mixer/grinder/blender, sandwich toaster/panini maker, pressure cooker, kadhai, saucepan, frying pan, paraat (to bowad atta/dough etc), chakla belan set, tawa, two tongs (chimta), mortar-pestle, ladle/kadchi (for dal/curry, deep frying), Palta (to flip), imela yokugaya, iti yezitya, izitya zokutya, iipleyiti zesidlo sangokuhlwa, iipleyiti zeekota, amacephe/iimela, iti/iimela, iti/iimagi zekofu, iiglasi (amanzi, ibhiya ebandayo), uthuli, isepha yokuhlamba izitya kunye nokukhuhla. Kwakhona ziquka amanzi okusela, iti exegayo, ubisi olungumgubo, ikofu, iswekile, ityuwa, ipepile.
- Igumbi lokuhlambela labucala elineetawuli ezisandul 'ukuhlanjwa, isepha yokuhlamba, ukuhlamba izandla, ishampu, isepha. Sinikezela ngee-bidets/ii-jet sprays & kungekhona iphepha langasese ngenxa yefuthe elibi lendalo.
- Indawo yokomisa iimpahla
- Inkonzo yokuhlamba impahla (ukuhlamba kunye nentsimbi) ifumaneka kwiimali zentlawulo nganye - nceda ubuze.
- akukho UKUTSHAYA - ngaphakathi okanye ngaphandle kweflethi okanye indlu ekwicomplex
- Nceda ungayichithi indlu ekwicomplex okanye iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke. Nceda ungaphazamisi abanye abahlali/abamelwane. Nceda uphathe wonke umntu okule ndlu kunye nendlu ngentlonipho.
- Zonke iindwendwe ezihlala kuloo ndlu kufuneka zisayine ukubhalisa kweendwendwe zize zabelane ngeGovt yazo. Isazisi (esiza kusifota).
- Abantu basemazweni angaphandle kufuneka babonise ipaspoti/i-visa echanileyo
Bonisa zonke 35 izinto onokuzisebenzisa
4.85 out of 5 stars from 34 reviews
4.85 · Izimvo eziyi-34
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi34
Indlu ilele entliziyweni yecandelo elixakekileyo 18 - 19 indawo yaseNoida. Yonke into esuka kwiivenkile ezithengisa ukutya kunye nabathengisi beziqhamo/imifuno ukuya kwiindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, izibhedlele, iibhanki, iithiyetha njl.
I-200m ukusuka kwi-Atta Market kunye nabathengisi bayo, abathengisi beziqhamo / imifuno njl.
Iimitha ezingama-400 ukusuka kwintengiso yeCandelo le-18 ephithizelayo kunye neevenkile zayo, iivenkile zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya, iibhanki, iithiyetha njl.njl.
I-750m ukusuka kwi-DLF Mall yaseIndiya- ithathwa njengenye yezona ndawo zinkulu kunye nezikhulu zokuthenga eIndiya zisasazeke ngaphezulu kwe-2 yezigidi Sq. Ft.
I-2km (ekunye neTulsi Marg) uhamba ukusuka eNoida Stadium -- ibala lemidlalo livulekele uluntu kwaye nokungenwa kusimahla. Ibala lemidlalo lineekhilomitha ezi-2 ubude bokubaleka/umzila wokuhamba. Ecaleni kwendlela yokubaleka/yokuhamba yingoma yebhayisekile yeekhilomitha ezi-2; iibhayisekile ziyafumaneka ukuze zirente.
Umbuki zindwendwe ngu- Aparna
Ujoyine nge- 2021 Meyi
Siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye siya kuhlala singekho (ngaphandle kwexesha lokungena / ukuphuma), ngaphandle kokuba ufuna uncedo lwethu ngento ethile.
Ukungena kuya kufuneka wabelane nge-govt. Isazisi (kundwendwe ngalunye oluhlala kwipropati), kwaye ugcwalise irejista yeendwendwe. Siza kuthatha umfanekiso wesazisi. Eli linyathelo esilithathayo ukuze siqinisekise ukhuseleko lweendwendwe zethu -- ngenxa yokuba sineendwendwe ezininzi ezihlala eYash Lok kwizitudiyo zethu ezahlukeneyo, kubalulekile ukuba sazise undwendwe ngalunye ngaphambi kokuba sibangenise kumagumbi okuhlala.
Okwangoku, umzala wam uhlala kumgangatho osezantsi kunye nosapho lwakhe, kwaye uya kukunceda ngokungena / ukuphuma, izalathiso, okanye naluphi na olunye uncedo lwemihla ngemihla onokulufuna. I phone yakhe ndiyifake no. kwimiyalelo yokungena. Zive ukhululekile ukuba umtsalele umnxeba xa ufuna uncedo ngento.
Ngenye indlela ungandifumana ngokuthe ngqo nge-airbnb chat. Nangona kunjalo nceda uqaphele ukuba ngoku ndingaphandle kwelizwe kwaye ngelixa ndizama ukuphendula ngokukhawuleza, kuya kubakho ixesha lokuphendula kwimiyalezo ethunyelwe ngexesha lam lobusuku (EST).
Ukungena kuya k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Noida